Hordhac: Bournemouth vs Man United – Xiddigaha Dhaawacan, Shaxda Macquulka Ah & Xaqiiqooyinka Kulanka Galabta Oo Faah-Faahsan - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Hordhac: Bournemouth vs Man United – Xiddigaha Dhaawacan, Shaxda Macquulka Ah &...
Hordhac: Bournemouth vs Man United – Xiddigaha Dhaawacan, Shaxda Macquulka Ah & Xaqiiqooyinka Kulanka Galabta Oo Faah-Faahsan
Manchester United ayaa isha ku heysa rikoor fiican muddo kadib waxeyna doonayaan iney afar kulan oo xiriir ah banaanka kusoo badiyaan, waxeyna galabta ku ciyaari doonaan xeebaha koofureed ee England maadaama ay marti u noqon doonaan Bournemouth.
Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa si fiican ugu qanacsan sida ay ciyaartoydiisa u muujinayaan soo kabashada, waxaana la fahamsan yahay iney si tartiib tartiib ah iskula qabsanayaan, waxaana jira waxyaabo yar oo kooxda aysan wali xalin.
Eddie Howe kooxdiisa waxaa ragaadiyay mudooyinkii ugu dambeeyay dhaawacyo aafeeyay inta ugu badan ciyaartoyda muhiimka ah, balse wuxuu doonayaa iney mar kale abuuraan hadal heyn ku saabsan sida ay Red Devils uga badbaadi karto u laabashada heerka labaad, waayo hadii ay guul ka helaan kaalmaha hoose ayey u dhici kartaa.
Kulanka: Bournemouth vs Man United
Garsoore: Christopher Kavanagh (England)
Tababare Howe ayaan wax rajo ah ka qabin iney xiddigaha dhaawaca kaga maqan usoo laabtaan, David Brooks ayaa ah kan ugu dhaw wuxuuna soo laaban doonaa kulanka ay 9-ka bishaan la ciyaari doonaan Newcastle.
Gosling ayaa bil kale garoomada ka maqnaan doona, sidoo kale Stanislas iyo Daniels ayaan kasoo kaban karin dhaawacyada jilibka ay ka qabaa tan iyo sanadka cusub.
Red Devils waxey ciyaari doontaa la’aanta Pogba mar kale, waxaana wali calaamad su’aal saaran tahay Matic iyo Shaw.
Rashford, Lindelof iyo Maguire shaki ayaa la galinayaa balse waxaa la rajeynayaa iney kooxda la safraan, sidoo kalana Bailly, Dalot iyo Tuenzebe ayaan kooxda la safri doonin.
Previous articleSAWIRO: SOMA oo Muqdisho ku qabatay Munsaabad lagu xusayay maalinta dhameynta dhibaateynta Wariyeyaasha
Next articleWasiir Caadle oo Magacaabis Sameeyay